musha / Platforms / PC / MT4 yePC
MetaTrader 4 imwe yezvakanyanya kufanirwa forex dzokutengeserana mapurisa munyika nhasi. Zvose zvinodiwa zvokutengesa zvishandiso uye zvigadzirwa zviripo kuti zvibvumire vatengesi kuti vaite tsvakurudzo nekuongorora, kupinda uye kubuda mabhizimisi uye kunyange kushandisa chechitatu-party automated business software (Expert Advisors kana EA's). Haasi kufara neAE inotengeswa here? MetaTrader inoshandisa iri purogiramu yemutauro MQL4, iyo inokubvumira kuronga rako pachako rokutengesa mabhoti.
MetaTrader 4 Broker software inopa inoshamisa rondedzero yekuongorora maturusi. Nguva pfumbamwe dzinowanikwa kune chimbo chega chega chemari. Izvi zvinopa kuongororwa kwakadzama kwequote dynamics. Raibhurari yakavakirwa-mukati meanopfuura makumi mashanu ezviratidzo uye maturusi kururamisa maitiro ekuongorora, zvichigonesa vatengesi kuziva mafambiro, kutsanangura akasiyana mamakisi maumbirwo, kuona kupinda uye kubuda mapoinzi, kupurinda machati echiridzwa chipi nechipi uye kuitisa yavo pachavo "pabepa" kuongorora.
MetaTrader 4 inosanganisira mabasa ose ekutengeserana anodiwa nhasi wevatengesi forex. Mirairo yepamusika, kumirira uye kumira mirairo, kutarisa kumira - zvose zviri ipapo pamunwe wako neMAT4.
Nzvimbo yacho inobvumira mirairo kuti iiswe nenzira dzakasiyana-siyana, kusanganisira kutengesa zvakananga kubva kumatsetse. Zvinyorwa zvitsuwa zvemashoko inzira inonyanya kukosha yekuona zvakakodzera kupinda uye kubuda pfungwa.
MetaTrader 4 inosanganisira mabhizimusi emakambani, chinhu chine simba chokukubatsira kutarisa nzvimbo dzakanakisisa dzekutengeserana nemamiriro emisika. NeFXCC MT4 yebhizimisi yebhizimisi yaunogona, simba rako rose rinogona kuiswa mukati mekushandisa maitiro ako ekutengesa, akachengeteka pakuziva kuti chikwata chezvigadziri muTT4 chiripo kuti chikubatsire.
Sezvo nekutengesa kupi zvako kwezvemari, kuchengeteka kwemashoko ari kuendeswa kunokosha zvikuru. IFXCC MetaTrader 4 Broker software inotumira mashoko kune uye kubva kumisika kune 128-bit akabatanidzwa. Izvi zviripo kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwemabasa ako ose. Mukuwedzera kune izvi, FXCC inopawo mukana wekushandisa shanduro yakaderedzwa yehutano hwePublic Key Cryptography. Mashoko akachengetedzwa mumutambo uyu hazvibviri kukanganisa chero nguva pfupi.
MetaTrader 4 inosanganisira huwandu hwese hweanonzwisisika mabasa, saka zvinongotora maminetsi mashoma kuti ugadzikane neese akasiyana sarudzo dzaunogona kuwana kwauri semushambadzi. Ipuratifomu ine yakavakirwa-mukati "Rubatsiro" basa kuti ugone kuwana mhinduro dzemibvunzo yakajairika zvakananga kubva mukati me software pachayo, kuti ugone kutarisa pazvinhu zvakakosha - kutengesa.
Chero chero chiitiko, kana MT4 rubatsiro rwebasa rusingakwanisi kupindura mubvunzo wako, vashandi vekutsigira FXCC vanogona.
MetaTrader 4 yokutengeserana inouya neyoyo yakagadzirwa-mumutauro wekugadzirisa mazano ekutengesa. MQL4 inokubvumira kuti uite EA yako (Expert Advisor) uye automate yako yebhizimisi yakabva pane yako purogiramu yakarongwa. Kushandisa MQL4 unogona kuvaka-rako rako reraibhurari yezvikwereti zvetsika, zvinyorwa uye basa database. Zvichibva pakuzivikanwa kwePrex MetaTrader 4 Broker platform, nhamba yakawandisa yemisasa uye misha yeInternet yakatanga, uko vashandisi vanogona kugadzirisa nekushandurudza mazano uye mazano ekuwana zvakanyanya mumutauro wekugadzira MQL4 uye MetaTrader 4.
Expert consevisor is mechanical trade system (MTS) yakabatana kune dzimwe nzvimbo. Vadzidzisi havakwanisi kukuzivisai chete nezvekwanisi yekupinda mhizha, asiwo kuita zvigadziro pamusoro pebhuku rebhizimisi nekuzviendesa kune zvakakwana kune yebhizimisi server. Kungofanana nedzimwe nzira dzekutengeserana, MetaTrader 4 Trading terminal inotsigira maitiro ekuedza kune dhoroondo yezvakaitika nemifananidzo yakajeka yekutengeserana kwekutengeserana uye kubuda kwepakati.
Custom Indicators ndiyo MetaTrader 4 inotora zvigadzirwa zvezhizha. Mhando Dhiyabhorosi dzinobvumira kusikwa kwezviratidzo kuwedzera kune avo vakatobatanidzwa muMetaTrader 4 terminal. Sezvakavakwa muzviratidzo zvinouya zvakatakurwa pane MT4, zviratidzo zvekodzero zvinotarisirwa kuongororwa kwekwenyanzvi uye hazvikwanisi kuvhura kana kuvhara maitiro pakarepo.
Scripts zvirongwa zvinotarisirwa kusarudzwa kune zvimwe zviito. Kusiyana neVanodzidzisa Vadzidzisi, Scripts haisi kumhanya-makangwara-akachenjera uye haasviki pane zvinoratidza zviratidzo.
Makiraibhurari iyo inoshandiswa kushandiswa databases iyo inowanzoshandiswa mabheji eMQL4 code yakachengetwa. Apo pakaronga hurongwa humwe kana EA mune MQL4, vashandisi vanogona kutora kubva mumabhuku avo emakrota uye kuwedzera mabasa aya akachengetwa kumabhoti avo matsva ekutengesa.